EU Travel Commission inokurudzira Hurumende kuti dzigadzirise zvirinani kupora
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » wedzero » EU Travel Commission inokurudzira Hurumende kuti dzigadzirise zvirinani kupora
Kuputsa Nhau dzeEurope • wedzero • nhau • Kuvakazve • ushanyi • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau • Trending Now • UK Kuputsa Nhau • Akasiyana Nhau
European Travel Commission (ETC) iri kudaidzira hurumende dzeEU kuti dzigadzirise zvirinani kugadzirisa kwavo COVID-19 nekutora nzira yakabatana yekusimudza kana kudzoreredza zvirambidzo nedanho rekuchengetedza, sezvo chivimbo chekushanya chiri kudzikira kurekodhi pasi rese. Tichifunga nezvezvazvino kuitika muzvirwere muEurope, ETC inosimbisawo kuti chero matanho matsva anogona kunge ari enzvimbo nesainzi, achidzivirira kumisikidza gumbeze kurambidzwa kwenyika kana kupatsanurwa, uye anofanirwa kuziviswa kune vafambi mazuva avo ekufamba asati asvika.
Nepo vazhinji veEuropean vachida kufamba zvakare uye kunakidzwa nezhizha 2020, havana chivimbo chekubhuka rwendo vakapiwa kushomeka kwekujeka pamipendero mipingo, kuwanikwa kwekufambisa, pamwe nehutano uye kuchengetedzeka protocols munzvimbo yavo yavanosarudza. Dhata nyowani kubva kuSojern, uyo anounganidza uye anoongorora dhata yekufambisa kubva kuzviuru zvevateveri venhandare nevashandi vemahotera kubva pasirese, zvinoratidza kuti kunyangwe zvirambidzo zvakawanda muEurope zvichisimudzwa pakati paJune, kutashanya kweEuropean kuri kuratidza kunonoka kudzoka. Sojern, achishanda pamwe neETC, akaongorora yekutsvaga uye yekubhuka dhata kumativi ese matatu emusika weEuropean wekushanya - kufamba mudzimba, kufamba pakati penyika dzeEurope, uye nzendo dzekunze kuEurope.
Kushanya mukati menyika: Chido cheEuropean chekufamba mudzimba, sezvakaratidzirwa mukutsvaga kwendege uye mabhuku, chakaramba chakadzika kwazvo muna Chikunguru 2020 nemadonhwe egore-pamusoro-egore e -37% uye hombe -67% zvichiteerana. Nepo mamiriro azvino asiri kutaridzika achikurudzira pamwe nekubhuka chaiko kwendege kuri kushoma, kukwira kwetsvage mukutsvaga kwendege kwakanyorwa muhafu yepiri yaChikunguru, izvo zvinoratidza shungu dzevanhu dzekufamba mukati memunyika mavo, zvichireva kuti ikozvino zvakanyanya kutsoropodza kupfuura nakare kose kune yakabatana yakarongeka EU mhinduro.
Kufamba kweEuropean: Mavhiki maviri ekutanga aChikunguru akaona kuwedzera kushoma mukubhuka kwemhepo (+ 6%) yekufamba kweEuropean kana ichienzaniswa naJune. Nekudaro, mwedzi zvawaifambira mberi, iyi tsika yakanaka yakapera nekubhuka kwendege kudonha zvakare. Saizvozvo, tsvakiridzo yakatorwa-zvishoma chete. Kuchinja uku kunoratidza kushingairira kwevanhu panguva imwe chete uye kuzeza nezvekufamba mune dzino dzisina chokwadi. Kureba kwekusava nechokwadi kwakakomberedza mitemo yekufamba uye zvirambidzo pakati penyika zviri kuenderera, zvichanyanya kuomera vatengi kuti vadzokerezve kuvimba kwekufamba uye kuti indasitiri ione kugadzikana kwakadzikama.
Kufamba kwenyika dzese muEurope: Kutsvaga kwepasirese uye kushomeka kwemhepo kuEurope zvakare kuri pasi pematanho egore rapfuura munaChikunguru pa -67% uye -72% zvichiteerana, nedatha raSojern richiratidza pachena kuti tsika yakadzika iyi yanga ichinyatso kutsvedza kubva muna Chivabvu. Kutsvaga kubva kune vatengi vekunze kwekuenda kuEurope kwakaderera ne4% pakati pekutanga nevhiki rekupedzisira raChikunguru, izvo zvinogona kutorwa, zvishoma, sechiratidzo chekuderedza kufarira. Maitiro aya ndeemumwe mufananidzo wekuti kudzokororwa kwekufamba kwenguva refu kunotora nguva yakati rebei, pamwe nekuedza kwakabatana kubva kumaindasitiri nevatongi zvakafanana.
Achipindura idzi nhamba dzinotyisa, Executive Director weETC Eduardo Santander, akati: "Sezvo isu tanga tichinyevera kwemwedzi yakati wandei, kunyatso kurongedza uye kuenzanisa mhinduro kune inoshanduka mamiriro eepidemiological mamiriro kuese EU uye nyika danho ndiyo chete mhinduro yekuchengetedza chikamu chekufamba muEurope. Zvisineyi, pane pachinzvimbo paine mufananidzo wakapatsanuka zvisingaenderane uye zvinogara zvichichinja nzira dzenyika. "Iyi data inoratidza zvakajeka kuti basa rakakosha richiri kuda kuitwa kana zvasvika pakubatanidza nzira iri kutorwa nenhengo dzenyika, chero kupihwa kupi kusati kwaitika."
Kuratidzira kukosha kwekudzoreredza kwekushanya senzira yekumutsidzira kweEuropean hupfumi, iyo yazvino WTTC tsvagiridzo inoratidza kuti kwese 2.7% kuwedzera kwekufamba kwekufamba kwaizounza kana kudzosa miriyoni yemabasa mubazi. Kubatanidza kusaenderana kwepatchwork yemitemo yeCOVID-19 nemazano ekufamba muEurope zvinogona kutungamira mukuwedzera kwevafambi ne27%, kudzoreredza mamirioni gumi emabasa mukufamba muEU.